Uyikhetha njani ilaptop yoyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UMonica sanchez | 06/09/2021 11:41 | Ezahlukeneyo
Ukuba uyabhaptizwa kwilizwe loyilo lwegraphic, mhlawumbi uye waziva isidingo sokutshintsha ilaptop yakho yakudala ukuze ilungele iimfuno zakho. Lo msebenzi akukho lula konke konke, unokuninzi onokukhetha kuko kwaye ukuba awunalo uhlahlo-lwabiwo mali oluphezulu kakhulu, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka unikezele ngezinto ezinokubangela umdla emsebenzini wakho.
Kule posi, ndiza kukufundisa indlela yokukhetha ilaptop yoyilo lwegraphic kwaye ndiza kukukhokela ukuze wazi ukuba kuya kufuneka ubeke phambili xa usenza isigqibo.
1 Yintoni elaptop ekufuneka ibe nayo kuyilo lwegraphic?
2.1 Ikhadi lemifanekiso
2.3 Ukuqhuba nzima
Yintoni elaptop ekufuneka ibe nayo kuyilo lwegraphic?
Xa uthenga i ilaptop yoyilo lwegraphic Kuya kufuneka uqiniseke ukuba uthenga onamandla ngokwaneleyo ukuxhasa isoftware oya kuthi ngokuqinisekileyo uyifakele ukuba ufuna ukufunda ukuyila. Ayizizo zonke iikhompyuter ezikulungeleyo ukusebenza nolu hlobo lweenkqubo kwaye xa zifakelwe zihlala zinciphisa kakhulu. Ndiza kuchaza apha ngezantsi ukuba zeziphi iimpawu zobugcisa ekufuneka uzivavanye xa uthenga ilaptop yakho.
Eli gama lisenokungavakali ngathi lincinci kuwe ngoku, kodwa i-CPU yenye yezona ndawo zibalulekileyo zekhompyuter kwaye, ngokoluvo lwam, iimpawu zayo kufuneka zibe sisigqibo sakho sokuthenga. I-CPU sisivakalisi esithi "central processing unit", xa sithetha nge-CPU sibhekisa kwiprosesa, izixhobo zekhompyutha ezinoxanduva lokutolika ii-odolo zenkqubo yekhompyuter.
Ukukhetha ilaptop yakho, jonga kwezi nkcukacha ze-CPU:
Xa uyila uyakuxabisa ukuba imisebenzi yenziwa ngokukhawuleza. Yiya kwiprosesa esisiseko esinee-cores ezine ubuncinci.
Izinga lokuhamba rhoqo kufuneka lilingane okanye likhulu kune-3GHz.
Ikhadi lemizobo yinxalenye yekhompyuter eguqula idatha yedijithali ibe yidatha yemizobo esele itolikwe sisixhobo sokubonisa (esweni). Oko kukuthi, yiyo eqinisekisa ukuba sinokubona yonke into ebonakalayo kwiscreen seelaptops zethu.Zeziphi iimpawu ekufuneka zibe nekhadi lemizobo lekhompyuter kuyilo?
Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba zimbini iintlobo zamakhadi emizobo:
Amakhadi emizobo ekhethekileyo: Zizo ezifumaneka ngokuzimeleyo kwikhompyuter, nangona okwangoku kukho abavelisi ababandakanya amakhadi emizobo azimeleyo kwiilaptops eziphezulu. I-priori inokuba yeyona ndlela ilungileyo yokuyila i-graphic, kuba ivumela ukubonwa ngokuthe kratya kunye nemizobo eyiyo ngakumbi. Nangona kunjalo, la makhadi ayabiza, athatha indawo, avelise ubushushu, kwaye asebenzise amandla ongezelelweyo, ke ngoko ukuwafaka kwiLaptop akukho lula kangako.
Amakhadi emizobo ekwabelwana ngawo: La makhadi sele akhiwe kwilaptop kwaye anyibilikiswa ngokwaneleyo kuyilo kunye nemisebenzi yokuhlela. Amakhadi emizobo okwabelwana ngawo namhlanje ayasebenza kwaye anikezela ngesisombululo esiphakamileyo. Ngokoluvo lwam, ukuba uqala kwihlabathi loyilo lwegraphic ayikulungelanga ukuchitha imali eyongezelelweyo kwikhadi elithile lemizobo, khetha ilaptop enekhadi yemizobo elungileyo ekwabelwana ngayo ekwabelwana ngayo.
Sidla ngokubhekisa kwi-RAM njenge "memory memory." Ngaphandle kwamathandabuzo, le yenye yezinto eziphambili ekufuneka uyithathele ingqalelo xa ujonge ilaptop efanelekileyo yoyilo lwegraphic, kodwa… kutheni ibaluleke kangaka?
Ulwazi lweekhompyuter ligcina "kwixesha elifutshane" kwi-RAM, yonke into abasebenza nayo ngalo mzuzu iphelela apho. Kwenzeka ntoni xa kungekho sithuba sishiyekileyo kwi-RAM? Ikhompyuter ikhangela enye indawo yokugcina olo lwazi kwaye iyigcine kwi-hard drive.
Ingxaki kukuba ukufikelela kwihard drive kuhamba kancinci kangangokuba yonke loo misebenzi ifuna ulwazi ekufuneka ikwi-RAM izakucotha. Kuyilo lwegraphic, uhlala usebenza neenkqubo ezininzi ngaxeshanye, ke uyakufuna i-RAM elungileyo, zama ukuba ne-16GB ubuncinci. Ukuba ungayifumana ngesantya sememori phakathi kwe-3200 MHz kunye ne-3600 MHz, kungcono kakhulu.
Ukuba ufuna ukuzinikezela kuyilo lwegraphic, indawo iya kuba yeyona ngxaki yakho ixhaphakileyo. Kule mihla uthenga i-SSD drive ayibizi kakhulu kwaye xa kuthelekiswa nemidlalo yangaphandle enzima banezibonelelo ezintle. Ezi ntlobo zeeyunithi zixhathisa ngakumbi kwaye azinabuthathaka kukothuka. Ukongeza, ukufikelela kuzo kuyakhawuleza, okuya kukuvumela ukuba ube nenkumbulo eyongezelelweyo ngaphandle kokuwucothisa umsebenzi wakho.
Ngoku, ukuba awufuni ukutyala imali kule nto kwaye uqala ngoku, ungayifaka i-SSD endaweni ye-hard drive yesiko. Nangona amaxabiso sele efana kakhulu.
Ngokwam eli lelona nqaku linokuthatha isigqibo xa sithetha ngendlela yokukhetha ilaptop yoyilo lwegraphic Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kutheni? Ngokoluvo lwam, xa uthenga ilaptop kwaye awufuni kuphuma kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho, kuya kufuneka wenze imirhumo encinci kwaye le yenye yezo kurhoxiso onokuzisombulula nanini na ufuna ngaphandle kwesidingo sokutshintsha iikhompyuter. Ungasoloko uthenga iliso oza kulisebenzisa njengescreen sesibini.
Andizukuxoka kuwe, ukuba nescreen esikhulu esinesisombululo esigqwesileyo kwenza ukuba ubomi bakho bube lula kakhulu. Ke ukuba usesikhundleni sokukhetha, khetha ubungakanani bescreen esiphezulu esixhasa isisombululo se-1290 × 1080. Ukuba ucinga ukuthenga iliso elahlukileyo, ndincoma ukuba uthenge enye engama-27 "okanye enkulu kwaye isisombululo sihlala si-1290 × 1080.
Ukuhamba phakathi kwezi paramitha sizimisele apha unokufumana iimodeli ezizinyibilikisayo ezingenalo ixabiso eliphambeneyo kwaphela. Kwakhona, khumbula ukuba kwikhondo lakho njengomyili wemizobo kuya kufuneka ufumane izixhobo eziphucula izakhono zesixhobo sakho.
Enye yeengcebiso ezilungileyo endinokukunika zona ngaphambi kokuba ndigqibe le post kukuba uthenge ithebhulethi yemizobo ngokukhawuleza, sesona sixhobo siluncedo nesixabisekileyo kubaqulunqi kuba ayizukukhawulezisa kuphela isingqisho sakho somsebenzi, iya kukuvumela ukwenza imisebenzi engcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Uyikhetha njani ilaptop yoyilo lwegraphic
Iindlela ezili-11 zekhadi lokushishina ukuze likukhuthaze